Talooyin: Imisa gabdhood ayaad ku aragtay sawirkaan? Sawiradan muuqaalkani waa xujo dhab ah oo Shiinaha ah! - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » QODOBO Talooyin: Imisa gabdhood ayaad ku aragtay sawirkaan? Sawiradan muuqaalkani waa xujo dhab ah oo Shiinaha ah!
Immisa gabdhood ayaad ku aragtay sawirkaan? Sawiradan muuqaalkani waa xujo dhab ah oo Shiinaha ah!
May 10, 2019 10: 18 By Fabiosa
Sawir la daabacay sawir qaade Swiss ah Tiziana Vergari on boggeeda Instagram ayaa sameeyey gogol caalami ah iyo dad badan oo la yaabay. Sawirkan cajiibka ahi wuxuu ka mid yahay mashruuca hashtag waxaana la wadaagay oo jecelay in ka badan saacadaha 13 000 hal toddobaad kaliya.
Soo-galinta sawir-qaadashada sawir-qaadashada (@tizzia) 6 MAR 2016 ee 1: 47 PST
Waa maxay sawiradan aan caadi ahayn ee sawirkaan? Waxaan arki karnaa dhowr gabdhood oo fadhiya qolka ku habboon dukaanka dharka ee Switzerland. Sida iska cad, gabdhuhu waxay ku yaallaan muraayadaha u dhow, iyagoo abuuraya qaloocan muuqata oo madaxa ku xanuunsada oo aad u adkeynaya tirinta gabdhaha sawirka. Kumanaan qof ayaa wadaagay ra'yigooda faallooyinka, iyagoo isku dayaya inay xalliyaan arrinka.
Marka loo eego dadka isticmaala, tirada gabdhuhu way kala duwan yihiin 2 iyo 14. Qaar badan oo ka mid ah waxay u maleynayaan in sawirku uu muujinayo digaag, halka qaar kalena ay u maleynayaan in ay yihiin saddex-laab ama xitaa quadruplets.
Adiga, immisa gabdhood ayaad aragtaa? Haddii aad ogtahay sida muraayadaha shaqada u shaqeeyaan, waa inay kuu sahlanaataa in aad qiyaasto tirada gabdhaha sawirada. Haddii aad u aragto mid aad u adag ama waxay ku siinaysaa madax xanuun, si fudud u geli si aad u hesho jawaabta saxda ah.
Tiziana Vergari, oo sawir ku dhejisay Instagram, ayaa ka dhawaajisay in aysan fileynin in sawirkeedu yahay mid caan ah oo aan wax badan ka badalin dad badan. Waxay sheegtay in gabdhaha sawirka ay yihiin gabdhihiisa, iyada oo intaa ku daray in ay kaliya leedahay laba gabdhood. Natiijo ahaan, ka jawaab celinta dadka isticmaala Internetka oo ka wada hadlay sawirada Instagram qaybta "comments", Tiziana soo noqtay:
Kaliya waxaan leeyahay labo gabdhood. "
Ha dareemin dambi haddii aad waqti badan ku qaadatay raadinta jawaabta saxda ah. Sawirku dhab ahaantii wuu wareerayaa. Laakiin ha ku qaldamin: marwalba way wanaagsan tahay in aad maskaxdaada ku tababbarto oo aad maskaxda ku hayso!
Miisaanka oo lumiya: halkan waa cunto diiriya oo Brazil ah oo ku gubi kara xNUMX kg hal bil ah - SANTE PLUS MAG